Oge ezumike a na-eche ogologo oge na-akpali ịgba ọgwụ mgbochi
Home » Akụkọ njem » Oge ezumike a na-eche ogologo oge na-akpali ịgba ọgwụ mgbochi
ezumike na-akpali ịgba ọgwụ mgbochi
COVID-19 coronavirus agbanweela, ọ dịkwa nwute na ebili mmiri nke atọ nke wakporo ụwa tụgharịrị dị ike karịa ka a tụrụ anya ya.
Ndị mmadụ na-ebute ọrịa ngwa ngwa, oge ụfọdụ ọ na-akawanye njọ.
Anyị ahụla ndị mmadụ na-enweta ụdị ọrịa dị iche iche nke eriri afọ na usoro nsogbu nri, na ọrịa ahụ emetụtala usoro nke obere karịa nke mbụ.
Omume ndị a na-eme ugbu a adịchaghị ka otu ihe kama ọ bụ ngbanwe dị egwu.
Ọ bụ ezie na ọnụọgụ ọrịa na ọnụọgụ ọnụọgụ karịrị ụlọ ma e jiri ya tụnyere otu afọ gara aga, ụjọ anaghịzi atụ ndị mmadụ. Nke a bụ COVID Y2Q1, anyị emeela ihe niile mana kpọọ nje ahụ maka nri abalị. Ndi mmadu ejirila obi uto nweta uche ha, kwuru ANIXE Insights na ya Travel Market Trends report. Anyị nwere ike ịkele atụmatụ mmadụ maka nke ahụ. Dika anyi nile biara n’onodu na COVID adighi aga ebe obula, anyi haziri ndu anyi na COVID n’uche dika ndumodu ogwu banyere ya, ihe omuma banyere ya na ihe ndi mmadu choro, nke a gunyere ka oge ezumike si akpali ogwu.
Mmepụta na mpịakọta nke ọtụtụ dị iche iche Ọgwụ mgbochi covid gafee ụwa enyela ụfọdụ ndị mmadụ olileanya na ha ga-eme ihe ngwangwa ma mee ka ndị ọzọ tụọ ụjọ site na onyogho nke usoro ọchịchị aka ike zuru ụwa ọnụ ebe nzuzo, nhọrọ, na nnwere onwe mmadụ bụ ihe gara aga.
Ileba anya na China taa
Ọrịa gị / ọgwụ mgbochi ọrịa dị na ekwentị mkpanaaka gị, n'oge na-adịghị anya na ibe ndị agbakwunyere n'okpuru akpụkpọ gị. Enwere igwefoto CCTV maka mmadụ 2 ọ bụla nwere ebumnuche 1: 1. Enwere ngwa nke na-akwụ gị ụgwọ maka ezigbo mmekọrịta mmadụ na ibe ya ma wepu isi maka omume ọjọọ mmadụ (n'oge a, nke gụnyere ịgbasa mmekọrịta mmadụ na ibe ya, iwepụ ihe nkpuchi gị ma ọ bụ ịmịpụ ya n'okpuru imi gị, ịgbụpụ ọnụ mmiri ma ọ bụ izu na ọha, imetụ mgbidi na ebe ndị ọzọ aka emeghị nke ahụ maka ebumnuche ahụ, na iwepụ akwụkwọ, n'etiti omume ndị ọzọ).
Enweghị ihe zuru ezu, ị nweghị ike iri nri na ụlọ oriri na ọ restaurantụ ,ụ, zụọ ahịa na nnukwu ụlọ ahịa, na-anya ụgbọ ala gị, banye n'ụgbọ njem ọha na eze, gaa n'ụlọ ihe nkiri nkiri, banye n'ụgbọ elu gaa ebe ọ bụla… ma ọ bụ hapụ ụlọ gị.
Ndị China anaghị eme mkpesa. Kemgbe ụwa, ha abụrụla ọchịchị Kọmunist. Nke a bụ naanị 5G maka ha.
Saint Lucia na-ebuputa usoro ihe omume zuru ezu
Njem ikuku na-adịghị ize ndụ: Ndụmọdụ iji belata ihe egwu ibute ọrịa mgbe ị na-efe efe
Onye isi ochichi nke ndi njem nlere anya nke United States nyere ndi isi ochichi US COVID-19 Pandemic Civil Medal Medal